“Cidlo Lama Joogi Karo Qof Dumar Ah…” Siyaasi Diiday Inay Waraysato Gabadh Wariye Ah – somalilandtoday.com
“Cidlo Lama Joogi Karo Qof Dumar Ah…” Siyaasi Diiday Inay Waraysato Gabadh Wariye Ah
(SLT-Washington)-Siyaasi Maraykanka u dhashay oo u tartamaya xilka barasaabka gobolka Mississippi ayaa diiday in ay kaligeed waraysato gabadh wariye ah, wuxuuna ka codsaday in ay la timaado nin la shaqeeya oo wehel u ah.
Gabadha lagu magacaabo Larrison Campbell ayaa sheegtay in siyaasiga Robert Foster ay weeydiisatay in ay ku wehliso safar 15 saacadood qaadanayay oo ay kula socon lahayd badhasaabka oo ku jira olole doorasho.
“Kani waa gaadhigayga, gaadhigaygana waxaa lagu dhaqmayaa sharciga aan aniga dajiyo” ayuu u sheegay CNN, isaga oo intaas ku daray in sababo diintiisa awgeed iyo balan uu ka qaaday xaaskiisa, taas oo ahayd in aanu meel kula kaliyoobi doonin qof dumar ah oo aan xaaskiisa ahayn.
Waxaa sidan oo kale hore u sheegay in aanu qof kale oo dumar ah kaligeed cunto la cuni doonin madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence.
“Aragtida dadka ay aaminaan waa xaqiiqda jirta dunidaan aan joogno, ma doonayo in dadka ay fikrad iga qaataan taasoo ah in aan samaynayo wax aysan ahayn in aan sameeyo” ayuu yidhi Foster.
Gabadhan wariyaha ah ayaa go’aanka siyaasiga ku tilmaamtay mid sooc ah, gaar ahaan lagu soocayo sinjigeeda dumarnimo.